विकर्ण - विकिपिडिया
हिन्दू महाकाव्य महाभारत, विकर्ण दुर्योधन र दुसासन पछि तेस्रो कौरव, धृतराष्ट्र र गन्धारीका छोरा थिए र राजकुमार दुर्योधनका भाइ थिए। विकर्णलाई विश्वव्यापी रूपमा कौरवहरूको तेस्रो सबैभन्दा प्रतिष्ठित भनेर चिनिन्छ।
दुर्योधन, दुःशासन, ९७ अन्य भाइहरू र दुःशला (बहिनी)
दुर्योधनको पासाको खेलमा उनीहरूले उनलाई हराएपछि विकर्ण एक मात्र कौरव थिए जसले पाण्डवकी पत्नी द्रौपदीको भरिएको सभामा भएको अपमानको बारेमा प्रश्न उठाए।
कुरुक्षेत्र युद्धको १४औं दिनमा भीम र विकर्णको गदा युद्धमा विकर्ण मारिन्छन्। उनको मृत्युपछी भिमको आँखामा आँसु बग्छ। उनको मृत्यु पछि, भीम विलाप गर्दछन्:
धर्म एवम् न्यायका ज्ञाता विकर्ण ! क्षत्रियोचित कर्तव्यको पालना गर्दै तिमी पनि यस लडाइँमा ढल्यौ। तिमी पनि मारियौ, त्यो पनि मेरो हातबाट। यो युद्ध पनि कति कठोर ! जसमा तिमी र पितामह भिष्मलाई पनि मार्नु हाम्रा लागि आवश्यक भएको छ ।
—  विकर्णको मृत्युमा भीमको पिडा
विकर्ण रामायणमा कुम्भकर्णसँग केहि तुलनात्मक छ। विकर्ण र कुम्भकर्ण दुवैले उनीहरूको दाइको कार्य धर्मको विरुद्ध हो स्वीकार गरे आवाज उठाए तर अन्ततः तिनीहरू दाइ दुर्योधन र रावणप्रति वफादार रहे। युयुत्सुको पनि विकर्णको जस्तै विचारधारा र मानसिकता थियो। युयुत्सुलाई पनि लाग्छ कि दुर्योधनको कार्य गलत छ; यद्यपि उनले कुरुक्षेत्रको युद्धको शुरुवातमा पाण्डवहरूको पक्ष लिए गरे। रामायणमा युयुत्सुको बराबर विभीषण हो । 
↑ Critical Perspectives on the Rāmāyaṇa. Jaydipsinh Dodiya Sarup & Sons, Jan 1, 2001 - Hindu literature, Sanskrit - 297 pages
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=विकर्ण&oldid=1030192" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ५ अगस्ट २०२१, २०:५७
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २०:५७, ५ अगस्ट २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।